Baolina metaly, baolina tsy misy fangarony, baolina UFO - Fiposahan'ny masoandro
Changzhou Sunrise Steel Ball Co., Ltd. dia mpamokatra baomba vy miaraka amina toerana fanandramana voaomana tsara sy hery matanjaka ara-teknika. Miaraka amin'ny karazany maro, kalitao tsara, vidiny mirary ary endrika am-bolo, ny vokatray dia ampiasaina betsaka amin'ny bearings sy indostria hafa. Ny vokatray dia eken'ny besinimaro sy atokisan'ny mpampiasa ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy sosialy miova tsy tapaka. Miarahaba ny mpanjifa vaovao sy taloha izahay amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana mba hifandray aminay amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa!
Ny orinasan-baolina amin'ny fiposahan'ny masoandro dia natsangana tamin'ny taona 1992.
SS304 avo lenta 1mm-20mm Stainless Steel Bal ...
Faritra fampiharana: vy vy 304 ...
Ambongadiny Sus316 Stainless vy baolina ho an'ny Lap-fehikibo
Faritra fampiharana: vy vy 316 ...
Large Quantity AISI 440C Stainless Steel Ball S ...
Faritra fampiharana: 440C stainless s ...
Faritra fampiharana: vy 420 ...
JEREO NY VOKATRA REHETRA
Ny fizotran'ny fitsaboana hafanana tsy manam-paharoa
Nanamboatra teknolojia fitsaboana hafanana mitambatra tsy manam-paharoa, avy amin'ny sary an-tariby, seranana mangatsiaka, baolina malama, fitsaboana hafanana, fikolokoloana, fikolokoloana, fanamainana, fanadiovana ho an'ny fanaraha-maso, fonosana, fizotran'ny famokarana tokana, ary andiana fizotra avy amin'ny fikirakirana vokatra semi-vita hamita varotra baolina.
Fitaovana fanandramana mandroso
Eo ambanin'ny fenitra ISO17025 dia azo zahana sy hosedraina ireo singa simika isan-karazany, toetra mekanika ary sela anatiny.
Ny tsipika famokarana baolina vy feno
Ny tsipika famokarana baolina vy rehetra dia fehezin'ny solosaina. Noho ny fihenan'ny fidirana an-tsehatra amin'ny tanana sy ny famindrana ny fizotrany, ny kalitaon'ny vokatra dia manana fahamarinan-toerana avo na eo anelanelan'ny andiany samihafa aza. Ny fampiasana ny vokatray dia afaka manome fahafaham-po bebe kokoa ny zavatra ilainao Claim.
Ball saosy manidina manokana ho an'ny fanamoriana polotra
Sehatra fampiharana: 1010/1015 carbon st ...
Tsara kalitao G200 Solid H62 3mm 3.175mm varahina C ...
Ny varahina dia matetika mampiasa varahina H62, izay ...
3mm Ball varahina, Ss304 Steel Ball, Ball varahina matevina, Ball varahina matanjaka, Ball varahina, Ball varahina 3mm,